Xiaomi CC9 smartphone: ny fanambarana ny tsipika vaovao | TeraNews.net
Xiaomi CC9 smartphone: ny fanambarana ny andalana vaovao
mpanoratra Vaovao momba an'i Tera Navoaka tamin'ny 02.07.2019
Ilay Shinoa goavambe dia nandray andraikitra matanjaka amin'ny tsena eran-tany ho an'ny fanamboarana finday avo lenta sy lafo vidy. Ary izao dia fotoana handeha amin'ny faravodilanitra vaovao. Xiaomi CC9 smartphone, na koa andalana fitaovana iray manontolo dia vonona ny handresy ireo fon'ny mpampiasa.
Ny tsipika vaovao an'ny mpanamboatra Shinoa dia ahitana modely: CC9, CC9e ary CC9 Meitu Edition. Ny fitaovana rehetra dia miorina amin'ny Mi 9, na izany aza, dia fanovana tanteraka ny andrian-dehibe. Miaraka amin'ny fahasamihafana iray - fa tsy ilay hazakazaka Qualcomm Snapdragon 855 mahery, ny vokatra vaovao dia nahazo ny Snapdragon 710.
Xiaomi CC9 smartphone: tombony
Ny Sinoa dia olona azo tsinontsinoavina. Fantatr'i Siaomi ny fomba hamonjy ary tsy very ny mpanjifa. CC9 dia manana endrika fisehoana Mi9 AmoLED 6,39 santimetatra feno efijery + miaraka amin'ny scanner amin'ny rantsantanana. Famirapiratra efijery 600 cd / m2.
Ireo mpampiasa dia mila selfie kalitao - tsy misy olana. Ny fakantsary lehibe indrindra dia ny Sony IMX586 miaraka amin'ny famahana ny 48 MP, ary ny fakan-tsary eo aloha amin'ny 32 MP miaraka amin'ny F / 1,6. Adaptatera NFC, emitter infrared, feo Hi-Res HD - fombafomba mahazatra ho an'ny finday maoderina.
Saingy miaraka amin'ny fahaleovan-tena, ny fakantsary Xiaomi CC9 dia nahavita ny sonian'ny Mi 9. Nametraka batterie misy mpanamboatra 4030 mAh ny mpanamboatra. Raha jerena fa misy ny dingana ho malemy Snapdragon 710, «havaozina», ny fisehoan-javatra vaovao dia hampiseho asa maharitra mandritra ny vola iray.
Xiaomi dia nanamarika fa ny finday avo lenta dia amidy amin'ny loko telo. "Spahola amin'ny masoandro ao anaty ranomandry" - toa ny fotsy, amin'ny loko mainty mahazatra, ary amin'ny raharaha manga miaraka amin'ny sonia. Nampahafantatra ny vidin'ny finday koa ny lehiben'ny orinasa, Lei Zun. Ny vidin'ny sarany ambany indrindra amin'ny 6 / 64 dia dolara 260 US. Fivarotana finday miaraka amin'ny 6 GB of RAM sy flash 128 - 290 $. Ny vidiny dia ho an'ny tsena sinoa. Afaka mividy finday eto ianao.
HUAWEI nova 5T: finday mora vidy sy avo lenta
Sony Xperia 1 smartphone - finday mahazatra
Xiaomi Mi 10 sy Mi 10 Pro Smart: mandinika, hevitra
TikTok mangalatra ny mombamomba manokana avy amin'ny finday
Ahoana ny fijerena Youtube tsy misy doka: PC, smartphone
LG Stylo 6 Smartphone miaraka amin'ny fampisehoana lehibe sy ny fanoratana tanana